AHRN and Best Shelter’s 3rd Regional joint-office operational in Sagaing – AHRN-Myanmar
By AHRN IT — In Activities	— 24/05/2020
AHRN နှင့် အရိပ်စစ်အဖွဲ့၏ တတိယမြောက် ဒေသစုပေါင်းရုံးကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်း
AHRN နှင့် အရိပ်စစ်အဖွဲ့ ၏ တတိယမြောက် ဒေသစုပေါင်းရုံးကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့ ၌ ၂၂ ရက် ၅ လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ် လိုက်ပါသည်။ ရုံးဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ လူငယ်များ နှင့် ပြည်သူလူထုများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု များကို ပိုမိုထိရောက်စွာပေး နိုင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အရိပ်စစ်အဖွဲ့ အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် ပဏာမခြေလှမ်းကို စတင် ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
AHRN နှင့် အရိပ်စစ်အဖွဲ့၏ ပထမဆုံး ဒေသ စုပေါင်းရုံးကို ကချင်ပြည် နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက် ဒေသစုပေါင်းရုံးကို ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အရိပ်စစ်အဖွဲ့၏ရုံးချုပ်မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
AHRN and Best Shelter’s 3rd Regional joint-office opened in Monywa, Sagaing Region on 22 May 2020. The objective is to extend their collaborative activities to people who use drugs, their partners, youths and other communities in Sagaing Region. Best Shelter is looking forward to this
a collaborative new initiative in Sagaing.
AHRN and Best Shelter’s 1st Regional joint-office was in Myitkyina, Kachin State and 2nd Regional joint-office was in Lashio, Shan State. Best Shelter Head Office is in Yangon.